आपुन एचकेले कोरोना बिरामीलाई गरे डेढकरोड सहयोग ! – Rajyasatta.com
Reading Now आपुन एचकेले कोरोना बिरामीलाई गरे डेढकरोड सहयोग !
आपुन एचकेले कोरोना बिरामीलाई गरे डेढकरोड सहयोग !
५ जेठ, काठमाडौँ । हङकङमा बसोवास गर्ने आपुन एचके (भोटे) ले कोरोना बिरामीहरूको उपचारका लागि डेढ करोडभन्दा बढी नेपाली रकम सङ्कलन गरी नेपाल पठाएका छन् ।
अहिले नेपालीहरू कोरोना महामारीको तातो भुङ्ग्रोमा छटपटाइरहेका छन् र स्वदेश तथा विदेशमा बस्दै आएका दानी मनहरू सेवाका कार्यमा जुटिरहेका छन् । यस्तै सेवाभावले नेपाल र नेपालीका समस्याहरूमा मनैदेखि सहयोग गर्दै आएका व्यक्ति हुन् आपुन एचके (भोटे) । आपुनले आफ्नो एकल प्रयासबाट १० लाख ५ हजार हङकङ डलर अर्थात् १ करोड ५१ लाख ३४ हजार ३१ रुपैयाँ नेपाली रकम सङ्कलन गरेका हुन् । आपुनले आफ्नो रोजगारदाता रियल स्टेट व्यापारी प्याट्रिक सेकबाट कोरोना सङ्क्रमित नेपालीहरूको सहयोगका लागि भनेर यो रकम प्राप्त गरेका हुन् ।
शैक्षिक परोपकारी संस्था सावर एक्सनमार्फत सो सङ्कलित रकमबाट नेपालीको उपचारका लागि ५ सय थान अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरिने छ भने स्वास्थ्य उपचारमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू पनि किनिने छ । आपुन नेपालीहरूको दुखप्रति निरन्तर सेवामा तल्लीन एक असल समाजसेवी हुन् । यिनले २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला पनि १५ लाख रुपैयाँ नेपाली रकम सङ्कलन गरेर नेपाल पठाएर नेपालीहरूलाई सहयोग गरेका थिए ।
लामो समयदेखि हङकङलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका आपुनको जन्म गण्डकी प्रदेश, पर्वत जिल्लाको भोकसिङमा भएको हो । सानैदेखि खेलकुद र समाजसेवाप्रति ढल्केका आपुन बक्सिङका कुशल खेलाडी मानिन्छन् । सन् २००४ देखि थाई बक्सिङमार्फत हङकङबाट व्यावसायिक खेल सुरु गरेका अपुनले ३३ व्यावसायिक खेल खेल्ने अवसर पाए । यिनले शारीरिक सुगठनको खेललाई समेत अगाडि बढाउँदै नेपालका विभिन्न समयका अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा सफलतासमेत हासित गरे । यिनले नेपाल शारीरिक सुगठनमा चौथो, हिमालयनमा चौथो र धर्मश्री २०१२ मा दोस्रो स्थान प्राप्त गरे ।
नेपाल र नेपालीका लागि सधैँ राम्रा सामाजिक काम गर्न चाहने आपुनले यसपालिको कोरोना महामारीमा नेपालीको हृदयविदारक अवस्था देख्दा मन थाप्न सकेनन् र चन्दा सङ्कलन गर्ने उद्देश्य बनाए । यही उद्देश्यले नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा आफू कार्यरत रियल स्टेटका व्यापारी प्याट्रिक सेकलाई अवगत गराए अनि चन्दाका लागि आह्वान गरे । सेकले उनको आह्वानलाई स्वीकार्दै यति ठूलो रकम चन्दास्वरूप उपलब्ध गराए ।
हालसम्म नेपालका लागि एक व्यक्तिले यति ठूलो चन्दा रकम सङ्कलन गरेको यो नै पहिलो हो । आपुन भोटेले तीन दशकदेखि हङकङको बसाइलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । हाल यिनले हङकङका विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भई खेलकुद र सामाजिक सेवाका कार्यहरूलाई मनैदेखि अगाडि बढाइरहेका छन् ।
One thought on “आपुन एचकेले कोरोना बिरामीलाई गरे डेढकरोड सहयोग !”
Ramkumar Ahat says:
अापुन एचके जी लाई मैले नजिकैबाट राम्रोसँग चिन्दछु। यो मात्र होइन उहाँको मनलाईनै छाम्ने र बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छु। उहाँ सरल मिजास,निष्कपट, निर्मल,दयालु मायालु र सहयोगी मनकाा धनी हुनुहुन्छ । यो कुरा उपरोक्त एकल प्रयासको सहयोग र उहाँका अघिपछिका सहयोगका कार्यले पनि पुष्टि गर्दछन।तिस-तीस बर्ष हङकङको बसोबासले उहाँमा हङकङी पन भए पनि उहाँको मन नेपाली छ। नेपाल राम्रो कसरी हुन्छ, नेपालीको दुख कसरी हटाउने बारे उहाँ चिन्ता गर्ने मानिस हो। नेपालको शासन, प्रशासन, कर्मचारी, र सरकारको गलत रवैया,सामाजिक कुरीति र बेथिति प्रति उहाँ उदासीन हुनुहुन्छ। प्रवासमा व्यवस्थित भएर पनि नेपाल बारे चिन्ता गरिरहने उहाँ एक सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ । सबैलाई अारोग्य रहन, खानपिनमा परहेजमा रहन, गलत कार्यबाट अलग रहन र कर्तव्यको पालना गर्ने सुझाव उहाँले बाँडीरहनु हुन्छ । निडर,स्वालम्बी,स्वाभिमानी कर्तब्यनिष्ठता र उहाँको स्वभाव हो। यस्ता सहयोगी मनका धनीलाई हार्दिक सलाम छ।